Sheeko – SHEEKADA ‘QURBEJOOG’ – qiso qof, qoys iyo qaran.
SHEEKADA ‘QURBEJOOG’ – qiso qof, qoys iyo qaran.
By Maxamed Haaruun.
Fariin kooban: akhristayaal iyo saaxiibayaal, waxan idinla wadaagayaa dhawr arimood oo ay tahay inaan tilmaamo inta aanan qaybta ugu dambaysa ee sheekada iyo idinka idiin kala bixin. Waxan ugu horaynba halkan uga mahad celinayaa asxaabta iyo akhristayaashii emails ka, telefoonada, facebook iyo sida tooska ahba iigu soo war celiyay markay sheekadan akhriyeen, inta soo socotana waan ka dhur sugayaa. Waxan u mahad celinayaa bahda websites yada, intoodii aan tooska ula xidhiidhay, iyo intii iyaka ka sii xigatay sheekada ee aniga ogolaanshaha I soo waydiiyayba. Dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin. Sheekadan aan manta soo khatimaynaa, sidaan horeyba u sheegnay, waxay kaalinta koobaad ka gashay tartankii sanadlaha ahaa ee Sheeko iyo Shaahid – 2012, waxaana lagu daabacay ogolaansho rasmi ah oo ay bixisay shirkada barnaamijkaas abaabusha. Sheekadani waxay qayb ka noqon doontaa sheekooyin ku soo bixi doontaa buug soo baxaaya 2013 ka horaantiisa oo ay ku jiraan lixdii sheeko ee ugu horeeyay tartankaas 2012.
Wax la raajaa rag (dad) kuma samee, Ku soo dhawaada qisada qaybteedii 12aad: ….. Tigidhadii Wadankii loogu baxaayay maalin hore ayay dhaceen, laakiin cidina dan kama laha. Marka wakhtigoodu qaar dhacoba, tigidho kale ayaa hadba la goostaa oo hadana wakhtigoodu dhacaa! Markii la dhamaystay wax ‘nasasho’ lagu sheegay, waatii aakhirkii wadankii loo ambabaxay. Waxa khalkhal wayni ka dhacay safarkoodii kolba baaqanaayay. Marar badan baa haween, caruur, madax-dhaqameed iyo ganacsato beesha u badan wadooyinka la tubay, laakiin hadana loo sheegay inuu Amiir Carbeed Gudoomiyihii u yeedhay oo baajiyay. Waxay maalmuhu is riixaanba, waatii maalintii Jimcuhu soo gashay, waatii diyaaradii Daallo ula soo duushay halkaas iyo wadankii. Cid u sheegtay mooyee, dadku waxay iska dhaadhiciyeen inuu Amiirka Imaaraadku dayuurad khaas ah soo siiyay. Waatii dhawr Wargays oo kuwa reerka ah iyo wiilashii Mareegaha beesha wax ku qori jirayba la diyaariyay. Caruur dugsiyadii laaga baajiyay oo tiro badanna waatii shan ka mid ah ubaxyo loo dhiibay ee madaarka lagu diyaariyay si ay waftiga qoorta ugu sudhaan. Xataa Xaaji Warfaa oo ay Gudoomiyaha aabihiis saaxiibo ahaayeen, kana mid ah ganacsatada waawayni waakii shan iyo toban kun oo Doolar ku bixyay in lagu soo iibsho roog cas oo dhulka lagu goglo marka gudoonshaha la soo dhawaynaayo. Reerihii miyigana waatii laga soo kaxeeyay geel iyo lo’ tiro badan oo maalintaas la qallo. Sida muuqata, soo dhawaynta gudoonshaha looma kala hadhin, rag badan, oo Xaaji Warfaa ugu magac dheeryahay, oo sida dadku ku xanto, aan agoontii walaalkiis ka dhintay kiish bariis ah u quudhin saw kiishada ma furin, reer miyi sabool ahina xoolohoodii oo aanay caruurtadaba u hurin ma dhiibin. Maxay u dhiibi waayeen saw sharaftii reerka lagu dhisi mayo? Indhaha qofka Soomaaliga ah, ma mabdda wax lagu bixiyo ama loo dhinto oo taas ka wayn baa jirta? Saw doofaarkaba, sida ay Soomaalidu ku hal qabsato, ficil la’aan looma cadaabo, qofkii aan ficil lahaynina xawayaankaas la meeqaan maaha ama kamaba liito? Haa waa sidaas, waana sababta fursada siisay Aw Mirqaan iyo ragiisa. Isla sababtaas ‘beelnimada’ ayaanay dambiilayaal badan, oo ay ahayd in xabsiyo lagu ilaaliyo ay sharaf ku leeyihiin oo ku daaqaan arlada.
Intaas hadii uu yidhi, waakii ninkii candhada gooyay, hadalkii uu u guud maray markii hore ayaanu imika gunta ugu daadagay, waxaanu yidhi, “Adeer, waxba iga guuxi maayaan, waxna iguma dhex jiraan ee waa kaligay, hadalkaas aad tidhina waa edebdaro. Adeer hadalkaagu waxba ima dhibaayo, waxan se ka yaabayaa inaad bulshada qas hor leh galisid, ma se dhacayso intaan noolahay. Nabadgalyada aad manta halkaas ku fadhido rag aan ka mid ahay baa wax ka dhisay, tacab iyo rafaad badanina waa naga galay. Cid ogolaan karta in nabada la taabtona ma jirto, mana jiri kartoba. Adeer, waxan kuu sheegayaa, beelahan Reer-Qansax iyo Reer-Qodax ee aad ka hadlayso wiilashooda qurbaha ka yimaadaa, gaar ahaan kuwii aad isku xilyada dhoofteen waa kuwa iskuulka magaalada iyo cisbitaalkaba soo dhisay, aadna waa loogu reeyay. Kuwo badan oo sidaadaas oo kale ahna waa leeyihiin, laakiin se kuwooda iyo adigaba anaga ayaan yeelaynin warkooda ee taas ogow. Ina Xaaji-Yaasiinoow, Waxaad ku hadlayso ayaan arkayaa walaahi inaanad neef adhi ah haraad ka biinaynin. Wadooyin samada maraaya intaan la gaadhin kuwii dhulka ayaanaan hayninba, bad iyo barinna macaanayn maysid, taladeediina ma haysid. Adeer, dhalashadaadii baan ogaa, in badan baa lagaa dur sugay, aabahaana wixii uu xoolo lahaa wuu ku galiyay waa se lagugu khasaaray. Waxan u malaynayaa aabahaa inaanu waagii wiil khayr qababa ku ducaysan. Hooyadaa Qamar waagii markay odhan jirtay, “Dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay…” adeer sedan may moodaynin, anana maanu moodaynin. Kuwa halkan nala jooga oo khasaare ahiba waa jiraan, waxa se ka xanuun badan kuwiina meelahaas ku maqan, ee aan sugaynay inay caqli iyo talo cusub keenaan, ee sedan qaabka daran iyagoo u fikiraaya nagu soo laabanaaya. Khasaare ka wayni ma jiro, waxaanan kugula talinayaa adeer inaad meelihii aad ka timid dib ugu laabato. Nabadoon Geedi mawqifkiisu wuxu bir ku gooyay rabitaankii Aw Mirqaan iyo kooxdiisa, candhuuftooda ayaanay dib u liqeen.